Qalab casri ah oo lagu baarayo qandhada cudurka Rift valley oo la shaaciyay – The Voice of Northeastern Kenya
Qalab casri ah oo lagu baarayo qandhada cudurka Rift valley oo la shaaciyay
Star FM September 3, 2016
Machadka cilmi baarista dalka ee magacooda loo soo gaabiyo KEMRI ayaa shaaca ka qaaday qalab cusub oo casri ah kaaso sida ugu dhaqsiyaha badan ku ogaan karo qandhada Rift Valley.
Cilmi baarayaashan ayaa waxay sheegen in qalabkan oo lagu magacaabo ImmunoLine u yahay mid tayo leh, qiimo jaban ah islamarkaana si dhaqsa ah u soo shac bixin karo viruska ama cudur sidaha xanuunkaasi.
Qalabkan oo la keenay dalka intii lagu guda jiray shirkii ay lahaayen bulshada beeraha oo ka dhacayay Magaalada Mombasa ayaa waxaa uu ka caawinayaa dadka uu soo ridanayo cudurka in si dhaqsa ah loo ogado islamarkaana laga hortago.
Waxay cilmi baarayasha dalka sheegen in hadii laga ogaado xanuunka ay taasi sahleyso in laga hortago oo qofka bukaanka ah la siiyo daaweyn aan caadi ahayn, waxa uuna inta badan xanuunkan u badan yahay waqooyi bari ee dalka.
Madaxa KEMRI ama machadka cilmi baarista dalka James Kimotho ayaa sheegay In qalabkaasi ay ku tijaabiyeen 200 oo qof sidaasina waxaa lagu ogaaday in qalabkan u yahay mid wax tar leh.
Mr Kimotho ayaa hoosta ka xariiqay sida talaabadan ay ugu caawin karto dadka shacabka in looga hortago faafitanka xanuunkaasi.
Qalabkan hadda yaalo oo lagu baaro xanuunka qandhada daran wato ee Rift Valley ayaa waxa u qaata muddo si loo ogaado qofka in u hayo iyo in kale.
← Gaari laga qaatay OCPD-ga Magaalada Makweni oo dib loo helay
Laba Wariye oo lagu weeraray Maamul goboledka Muranga →